Nelson Chamisa wants the Army to join in on his August 16 demo | Mbare Times
Home Political News Nelson Chamisa wants the Army to join in on his August 16...
Nelson Chamisa wants the Army to join in on his August 16 demo
MDC Alliance leader Nelson Chamisa has pleaded with the country’s army to join his MDC party’s planned protest set for Friday that insiders claim is aimed at toppling President Emmerson Mnangagwa.
In a statement to mark Defence Forces Day Tuesday, Nelson Chamisa said while some soldiers might have “strayed”, he was certain most of the country’s uniformed forces understood the aspirations of ordinary Zimbabweans.
The MDC has given notice of what it has called “Free Zimbabwe March” set for August 16th which it officially says is aimed at pushing Mnangagwa to dialogue with Chamisa and find a lasting solution to “legitimacy issues” surrounding the Zanu-PF leader’s year-old administration.
You Might Also Like – Police warn foreigners – Stay off Zimbabwe Politics
Ambassador Mathema said MDC-Alliance has started rounding up street kids using unmarked and plate-less vehicles, whom they want to use in destroying and looting shops “in return for some goodies”. read more
Free Zimbabwe March
Previous articlePolice warn foreigners – Stay off Zimbabwe Politics
Next articlePresident Emmerson Mnangagwa challenged to do public HIV test